चीन उच्च गुणवत्ता औद्योगिक ब्रश रेशा कारखाना र निर्माताओं | झिनजिया
मात्रा (किलोग्राम) १ - २००० > २०००
अनुकूलित लोगो (न्यूनतम आदेश: २०० किलोग्राम)
अनुकूलित प्याकेजि ((न्यूनतम आदेश: २०० किलोग्राम)
प्याकेजि:: ब्यागिFor्ग फर्महरू उत्पादनहरू: ओभलकट लम्बाई: १00०० मिमी + -१० मिमी
आपूर्ति क्षमताआपूर्ति क्षमता: २००० टोन / प्रति मुख प्रति टन्सप्याकेजि & र वितरणप्याकेजिंग विवरणहरू ： पीई ट्यूबपोर्ट ： शंघाई र निन्बोउत्पाद लाभ
विभिन्न मिश्रित सामग्री, एन्टिब्याक्टेरियल, आयन स्वास्थ्य देखभाल थप गरेर, गन्ध हटाउनुहोस्, उच्च तापमान प्रतिरोध र अन्य सुविधाहरू।
Q1 के तपाइँ निर्माता हुनुहुन्छ?
हो हामी कारखाना हो। हामीले १० वर्ष भन्दा बढि सफाई उद्योगमा पेशेवर समाधान प्रदान गर्नमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेका छौं।
Q2 यदि मैले उद्धरण प्राप्त गर्न चाहान्छु भने म कुन विवरण प्रदान गर्ने छ? ब्रशको आकार (आन्तरिक व्यास र बाह्य व्यास); सम्पूर्ण ब्रशको वजन; ब्रश को भरिने सामग्री; मात्रा।
Q3: के म केही नमूनाहरू लिन सक्छु? A: हो, हामी निःशुल्क नमूना आपूर्ति गर्न सक्छौं, तर शिपिंग लागत हाम्रो ग्राहकहरु द्वारा भुक्तान गरियो।
Q4: के म मेरो आफ्नै लोगो प्रयोग गर्न वा आईटमहरू डिजाइन गर्न सक्दछु? A: हो, अनुकूलित लोगो र मास उत्पादनमा डिजाइन उपलब्ध छन्, तर हामीलाई आधिकारिकता चाहिन्छ।
Q5: त्यहाँ छुट छ?
A: फरक मात्रामा फरक छुट छ।
Q6: तपाईं कसरी गुनासो गुनासो व्यवहार गर्नुहुन्छ?
A: सबै भन्दा पहिले, हाम्रो गुणस्तर नियन्त्रणले क्वालिटी समस्यालाई शून्यको नजीकमा कम गर्नेछ। यदि हामीबाट वास्तविक गुणस्तरको समस्या आएको खण्डमा हामी तपाईंलाई प्रतिस्थापनका लागि नि: शुल्क सामान पठाउनेछौं वा तपाईंको घाटा फिर्ता गर्नेछौं।
Q7: हामीलाई कसरी सम्पर्क गर्ने?
A: तपाईं हामीसँग ट्रेड म्यानेजर, एमएसएन र स्काइप अनलाइन द्वारा कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं आफ्नो रुचि उत्पादनहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई छानबिन पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं हाम्रो टेलिफोन सिधा डायल गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईं हाम्रो जवाफ प्राप्त गर्नुहुनेछ। हामीलाई ईमेल पठाउनुहोस्। यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।